COWS-KA UGU CAANSAN: SHARAXAADA MIDABKA MADOW IYO MIDAB-CAD - XOOLAHA
Caleemaha madow iyo midabka cad ee lo'da
Waxaa macquul ah in dhammaan lo'da caanaha lo'da ay leeyihiin sumcadda ugu sareysa.
Ka dib oo dhan, xayawaankani waxay awoodaan in ay maalin kasta nagu qanciyaan kaliya dhalidda meelo, waxayna badanaa u tagaan hilibka, iyo hilibka lo'da ee laga helo iyaga ayaa sidoo kale leh qiime sare.
Inta badan, cunnooyinkaas waxaa lagu beeray beero waaweyn oo caanahooda siinaya dhir waaweyn. Hase yeeshe, qoysaska shakhsiga ah, ma ahan kuwo ku haboon, sababtoo ah dalabka caanaha guriga lagu sameeyey waa mid xasilloon, iyadoo aan loo eegin dhibaatooyinka iyo waqtiga sanadka.
Hoos waxaan ka heleynaa aqoonta madow iyo jilicsan ee caanaha bukaanka ah waxayna kuu sheegi doonaan faahfaahin ku saabsan qaababka iyo wax soo saarka.
Dhammaan macluumaadka ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee lo'da cagaaran ee lo'da iyo kuwa cadaanka ah.
Taariikhda caanaha iyo dadka ugu caansan
Si aad u hesho lo'da leh wax soo saarka caanaha sida sare leh, xulashada dhirta aad u dheer ayaa la sameeyay, iyo sidoo kale isgoyska jinsiyada Ruushka ee xayawaan madow iyo caddaan ah oo asal ahaan ka soo jeedo Dutchka.
Natiijo ahaan, tiro badan oo ka mid ah kooxaha gobolka ee xayawaankaas ayaa la abuuray, iyo khilaafaadka u dhexeeya qaar ka mid ah waa kuwo muhiim ah.
Farqiga ugu weyni waa in laga soo saaro noocyada kala duwan ee waalidka, iyo sidoo kale xaaladaha cimilada ee kala duwan ee content iyo sifooyinka quudinta. Ka dib markii dhan, bartilmaameedka ugu muhiimsan ee breeders ahaa in la jaro jinsi cusub polyzonal ah oo ka mid ah lo'da madow iyo-caddaan ka soo bulliyo mid ka mid ah a Dutch Dutch.
Waxaa ka mid ah jinsiga hooyada maxaliga ah ee lo'da loo isticmaalo:
Caanaha Ruushka ah.
Maanta, shan ka mid ah dadka ugu weyn ee lo'da madow iyo caddaanka ah waa la yaqaan, kuwaas oo ah: midka ugu weyn waa mid dhexe (oo laga soo qaatay lo'da Ruushka dhexe), Baltic, Siberian, iyo Ural.
Dadka shanaadna waxay ka kooban yihiin wakiillo ka kala socda degaannada kala duwan ee cimilada iyo gobollada - Belarus, Ukraine, Central Asia iyo qaybo ka mid ah dhulalka Transcaucasia. Waxaan u soo jeedinaynaa inaad fiiriso sifooyinka Saddexda carruur ee ugu horreeya ee xoolaha la tilmaamay:
Cawska madow iyo caddaan ee kooxda dhexe ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu weyn ee cabbirka waana kuwa ugu caansan.
Miisaanka haweenku wuxuu u dhexeeyaa 550-650 kiilo garaam. Tilmaamayaasha waaweyn ee waaweyn ee xayawaanka ayaa ah sifooyin badan oo ka mid ah wakiilada nooca hilibka waxsoosaarku ka badan yahay caanaha, oo ay ku jiraan madow iyo jajab.
Xaqiiqadu waxay soo jeedinaysaa in kooxdan dhexe ay sidoo kale xoog badan tahay waxsoosaarka hilibka. Dhismaha, kooxda lagu sharraxay waa mid is dulfuulan, oo leh dibad qurux badan.
Fikrad gaar ah waxaa soo jiidanaya lugaha gaaban, taas oo aan la yaabin miisaan culus. Laakiin marka laga reebo miisaanka, kooxda ayaa sidoo kale leh wax-soo-saarka ugu sareeya, taas oo noqon karta 5500-6500 oo kiiloogaraam xilliga nuujinta.
Laakiin faa'iido darrada ka mid ah caruurtan oo ah lo'da madow iyo caddaanku waa wax yar ee dufanka caanahooda - keliya 3.6-3.7%.
Wakiilo ka mid ah caruurnimadii Ural ee midabka madow iyo midabka cad ayaa miisaan culus oo dhistaa.
Jidhkoodu waa mid qalalan oo cufan, miisaankoodu wuxuu ka kooban yahay 500 illaa 600 kiilo garaam. Hilibka qaansarradan waa mid aad u hooseeya, sida lugaha sare.
Si kastaba ha ahaatee, waxsoosaarka caanaha ayaa sidoo kale wax yar ka danbeeya kooxdii hore (5000-6000 kg), si kastaba ha ahaatee, marka la eego cuntooyinka baruurta, caanaha lo'da Ural waa ka sarreeya - 3.8-3.9%.
Kooxda Siberian ah ee lo'da madow iyo caddaanka ah ayaa xitaa ka yar miisaanka kiisaska - kaliya 450-550 kiiloogaraam.
Dastuurkan noocan oo kale ah ayaa weli awood u leh inuu keeno tiro badan oo hilib hilib lo'aad ah.
Inkasta oo nacnuhu uu ka dambeeya marka la eego heerarka labada kooxood ee hore, way sarreeyaan: muddada hal nuujin, celcelis ahaan, 4500-5000 kg oo caano ah ayaa la helaa, heerka dufanka kaas oo ah 3.7-3.8%.
Laba kooxood oo ka mid ah lo'da madow iyo caddaan ah, oo aan la sheegin, ayaa ah dhexdhexaad ah sifooyinkooda, inkastoo ayan hoos u dhigin kuwa kor ku xusan ee wax-soo-saarkooda iyo wax soo saarka hilibka.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in kasta oo ay jirto magacyada gobollada kooxaha madow iyo macaawinada, dhammaantood waxay si buuxda ula qabsan karaan xaaladaha cimilada iyo xaaladaha cimilada ee ugu badan ee xabsiga.
Dhammaan sifooyinka qaansiirta madow iyo kuwa cadaanka ah: Maxaa kale oo ka duwan oo ku saabsan taranka?
Marka laga soo tago kuwa kor lagu sharaxay, tarankan sidoo kale wuxuu leeyahay sifooyinka noocan oo kale ah oo ah sifo gebi ahaanba dhamaan xubnaha, iyada oo aan loo eegin kooxda gobolka. First of dhan, waa candho xoolo iyo sifooyinka:
Udder waxay leedahay qaab koob, taas oo muujinaysa xajmigeeda weyn (ugu yaraan 120 sentimitir ee girth) iyo ku xirnaanta ku xirnaanta jidhka lo'da.
Waa mid aad u ballaaran, wuxuu leeyahay hoose hoose, laakiin waqti isku mid ah waxay ku haboon tahay in la iibsado oo aan faragelino xayawaanka marka uu guurayo.
Maqaarka candhuuftu waa mid aad u dabacsan, kaas oo u oggolaanaya in uu fidiyo inta lagu jiro isku-uruurinta caanaha iyo hoos u dhaca ka dib marka la iibiyo.
Sababtoo ah ibta naaska lagu dhajiyo meelo kala duwan oo midba midka kale ah, candhuufta ayaa noqota asmmetrical. Gaar ahaan, dhowr ka mid ah ibta gadaal ayaa si aad ah isugu dhawyahay oo ka mid ah labada qof ee hore, kuwaas oo aan saameyn ku yeelanaynin habka caanaha labada gacmood iyo qalabka.
Heerka caanaha ayaa aad u sarreeya - 43-45%.
Tilmaamahani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lo'da, sababtoo ah waxay muujineysaa saamiga caanaha laga soo saaray naasaha hore ee wadarta guud ee caanaha soo saaray lo'da.
Tirada noocan oo kale ah, sida ku jirta buuggan, waxay muujinaysaa saamiga wareegga rubuc-ka-mid ah ee candho xoolo iyo wax soo saarka caanaha ee wakiilada caanaha.
Dibedda, lo'da madow iyo caddaanka ah ayaa lagu kala saari karaa jireed xoog leh oo xoog leh. Qoorta xayawaanka sidoo kale aad u adaginkastoo ay fudud tahay. Maqaaro xoog leh oo deggan, si habboon loo dhigo.
Inta badan, muuqaalkan waxaa loo wareejiyay wakiillo ka socda jinsiyada ka soo jeeda awoowayaasha reer Ruushka ah. Sidoo kale, waa inaad fiiro gaar ah u leedahay dhabarka dhabta ah iyo qaybta dambe ee jirka, dhabarka dambe iyo iskutallaabta. Xabadka xayawaanka ayaa sidoo kale ah qoto dheer oo qoto dheer.
Caloolgu waa mid cufan, taas oo ah mid ka mid ah dhammaan wakiillada noocyada caanaha ee waxqabadka. Jirka aadka ah ee lo'darradan waa muddo dheer, laakiin saamigal ahaan.
Midabka ka mid ah lo'da waa dabiici ah madow iyo jajab. Qeybta ugu badan, dharka iyo midabka maqaarku waa madow, oo leh taako hoose oo caddaan ah, caarada daboolka ah iyo meel cad oo ku yaal aagga jilibka. Maqaarku waa mid aad u adag, oo hoos yimaada xilliga qaboobaha lakabka qaro weyn ee unugyada dufanka ah ayaa badanaa soo ururay.
Sharraxaadda xuduudaha wakiillada midabka madow iyo midab-cad
In ku dhowaad dhammaan xayawaanka, xayndaabka shakhsiyaadka lab ah ayaa ka sarreeya kuwa ka mid ah shakhsiyaadka noocyada dumarka ah.
Sidaa darteed, haddii tiro badan oo ka mid ah kuwa caajis ah ee noocaan ah ay ku kala duwanaan karaan 450 ilaa 650 kiilogaraam, ka dibna cufnaanta bulaacada - laga bilaabo 650 iyo in ka badan 1000 kiilogaraam. Goobaha dushooda, dhererka ugu horeeya ee badanaa ma badna 130 smimitir, dhererka labaadna wuxuu kudhowaad yahay 132 sentimitir.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee qiimeynaya:
Qoto dheer ee laabta ayaa ku jirta celcelis ahaan 67 sentimitir.
Wareerka naaska - laga bilaabo 39 ilaa 41 sentimitir.
Sawirka feerka ee girth waa 178-182 sentimitir.
Dhererka jirka wuxuu ka jiraa 153 ilaa 158 sentimitir.
In Maklak ballaaran ee jirka waa 45-46 sentimitir.
Wareegga metacarpus waa 19-20 sentimitir.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa in la ogaadaa milkiilayaasha mustaqbalka ah ee lo'da madow iyo-caddaanka ah
Dabcan, way ka fiican tahay inaad aragto mar ka badan si aad u maqasho marar badan, laakiin weli tafaftiri faahfaahsan oo ku saabsan wanaagga ee taranka waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku qanciso midnimadiisa.
Shaki la'aan, faa'iidada ugu muhiimsan waa wax soo saarka caanaha iyo ku habboonaanta ilaalinta beeraha waaweyn iyo shakhsiyaadka.
Laakiin, waa la taaban karo sifooyinka wakiilada lo'da madow iyo caddaan:
La qabsashada wanaagsan ee xaaladaha cimilada ee kala duwan.
Isku darka jirka ee wakiilada maxaliga ah ee gobollada kala duwan ayaa u ogolaanaya ilaalinta iyo taranka lo'da ee gobollada koonfurta iyo waqooyiga. Tani waxay ahayd waxa ay tarbiyadu isku dayeen in ay gaaraan marka ay tarmaan taranka madow iyo-cad.
Si kastaba ha noqotee, lama ogola in ay wakiil ka noqoto cunsuriyada daaqa bilaash ah sanadka oo dhan, maaddaama ay si liidan ugu habboon tahay heerkulka qaboobaha. Xilliga hawada kulul, waxay u baahan doonaan biyo badan iyo hoy qaas ah, caleemaha.
Xasilinta difaaca jirka ee saameynta cuduro kala duwan.
Dabeecadani waxaa loo aaneyn karaa tan ugu muhiimsan, maadaama ay si gaar ah muhiim ugu tahay lo'da. Xaqiiqdu waxay tahay in cudur kasta uu saameynayo xayawaanka, marwalba wuu saameeyaa soosaarka caanaha.
Cows-madow iyo caddaanku waxay u adkaystaan ​​cudurada viral ee caadiga ah, iyo sidoo kale caleemaha aan la daweyn karin.
Cudurka mastitis iyo cudurrada neefsashadu waa u dulqaadan karaan shakhsiyaadka si aan caadi aheyn, badanaa oo aan lahayn dhibaatooyin. Xasilinta xasiloonida waxaa sidoo kale lagu muujiyaa xayawaanka yaryar ee la quudiyo caanaha hooyada.
Isticmaalka wanaagsan ee cawska cagaaran ee meelo badan oo daaqsinka ah, silage iyo suntan.
Wixii caano wanaagsan ee caanaha waa inuu ahaado quudin fiican, adigoo isticmaalaya fitamiin badan oo cagaaran sida ugu macquulsan. Sidaa darteed, xagaaga, xayawaanka ayaa si fiican u daaqay daaqsinka furan, taas oo ay ku dhaqmi doonaan "nadiifin".
Isla mar ahaantaana, quudinta noocaas ah waxay ku filnaan doontaa inay ku filan tahay caanaha caadiga ah. Xilliga jiilaalka, silajka iyo caanaha waa in ay sameystaan ​​saldhigga cuntada, inkasta oo ay ku daraan khudradda iyo dufanku waxay sidoo kale saameyn wanaagsan ku yeelan doonaan wax soo saarka guud.
Awoodda shakhsiyaadka si fudud uula qabsanaya culeyska iyo caanaha.
Tani waa arrin aad muhiim u ah kuwa doonaya in ay iibsadaan lo'da ee taranka la tilmaamay ee gobol kale. Tani wax dhibaato ah kuma abuuri doonto, maadaama ay xayawaanku awood u yeelanayaan inay bedesho iyada oo aan wax dhibaato ah oo si buuxda u horumarin.
Sidoo kale, wakiilada caleenta si fudud ayaa loo isticmaali karaa oo loo waafajin karaa isbeddel ku yimaada xaaladaha cimilada, mudada dheer ee roobka iyo abaaraha sii dheeraaday.
Caanahan tani waa mid aan si dhakhso ah u helin miisaankiisa, laakiin sidoo kale si dhakhso ah u noqoshada diyaar u noqoshada iyo digaagaha.
Isugeynta miisaan ka badan 400 oo kiiloogaraam hal sano iyo bar kala badh, kuwa kiciyeyaashu waxay mar hore bilaabaan inay muujiyaan dhaqdhaqaaq jinsi, sidaas darteed guntii ugu horraysay waxay caadi ahaan bilaabaan 2-4 bilood ka hor kuwa kale ee noocyada kale.
Isla mar ahaantaana, waxay muujiyaan tayada hooyada oo aad u wanaagsan, oo si xushmad leh u daryeeshay caruurtooda. Dhallaanku caadi ahaan waa mid fudud, oo aan caawinaad lahayn. Burenka ayaa weli ku fir fircoon xitaa tan 10 sano ka dib, iyada oo aaney yareynin wax soo saarka caanaha.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo nooca ugu fiican ee lo'da.
Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado in lo'da la sharxay ay aad ugu habboon tahay iibinta mashiinka. Tani waxay gacan ka geysataa habka habboon ee ibta iyo dhererkooda ugu fiican ee qalabka.
Sidoo kale, habka ugu wanaagsan ee tani waa masaafada udub-dhexaadiyaha ilaa dhulka, kaas oo celcelis ahaan ah 61 sentimitir. Waxaa intaa dheer, sababtoo ah isticmaalka mashiinka caanaha, nidaamka caanaha ayaa la yareeyaa inta ugu yar ee waqtiga, maaddaama caanaha ka soo baxa naasaha si deg deg ah oo fudud.
Waxa kale oo ay arrintani ka qaybqaadataa dabeecadda xasiloonida xoolahaoo si fudud u la qabsanaysa qaylo farsameed. Marka caanaha gacanta laga qaado sidoo kale ma dhicin dhibaatooyin, sababtoo ah ibta ayaa si fudud ugu habboon gacantaada, sababtoo ah dhererkoodu waa 5-6 sentimitir.
Caanuhu wuxuu bilaabmaa inuu ka baxo cadaadiska ugu yar, gaar ahaan haddii candho xoolo uu buuxo. Sababtoo ah arrintan, mawqif aan ku kalsoonayn oo lagu iibiyo xayawaanka xoolahaani waxay keenaysaa jiritaanka noocaan oo kale sida mastitis-ka inta badan.
Hawlaha taranta iyo taranka ee la xidhiidha noocgan ayaa wali socda. Waxay badanaa ujeedadoodu tahay inay kordhiso waxyaabaha dufanka leh ee caanaha. Markaad ka gudubto nuucyada kale, lo'da madow iyo caddaanku waa ilaha nuucyada caanaha keena, la qabsashada iyo habka difaaca jirka.
Intee ayuu sarre u yahay waxqabadka qaansooyinka lagu qeexay: calaamadaha ugu saxsan
Wax soo saarka caanaha sida sheyga ugu weyn ee dalabka xoolaha
Haddii aan ku xisaabtanno in mid ka mid ah lo'da caanaha ee Russia, waa lo'da madow iyo caddaan ah oo wadaago badan (oo ah 53%), ka dibna waxaan ku dhammaan karnaa in waxsoosaarku aad u sarreeyo.
Haddii aan soo koobno ​​natiijooyinka wax soosaarka caanaha gebi ahaanba dhammaan noocyada caanaha, ka dibna celceliska caanaha dhalidda caanuhu waa 5.5-8.5.000 kiiloogaraam oo caano ah.
Isla mar ahaantaana, cuntooyinka dufanka sida caadiga ah waxay u dhaxeysaa 3.4 ilaa 4.2%, iyo tusmada borotiinka ee caanuhu ku kala duwan yihiin 3 ilaa 3.4%.
Waxa kale oo muhiim ah in lo'da madow iyo-caddaanku ay leeyihiin caano aad u fiican. Markaad caano ku caawineyso qalab gaar ah hal daqiiqo waxaad ka heli kartaa 1.2 ilaa 1.4 kiiloogaraam oo caano ah.
Noocyada wax soo saarka hilibka ee taranka
Way cadahay in xayawaan kasta oo ka mid ah qiimaha ugu sarreeya marka la eego helitaanka hilibka wanaagsan, gaar ahaan marka ay timaado lo'da. Sidaa darteed, inkasta oo ay jirtey sarre sare ee chicks ah, buluugyada madow iyo kuwa madow ayaa loo isticmaalaa dhar-beel ama qoryaha.
Qiimaha waa xitaa hilibka ka mid ah lo'da kuwa gaaraya qaangaarka.
Xaqiiqada ah in wax soo saarka hilibka ee caanahani ay sarreeyaan waxaa lagu fahmi karaa miisaanka shakhsiyaadka, tilmaamayaasha aan hore u soo sheegnay. Laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la sheego in dhalinyarada madow iyo jilicsan ay awoodaan in ay miisaanka si deg deg ah u helaan.
Sidaa darteed, haddii dhalashada, weylaha miisaankiisu yahay 35-40 kiiloogaraam, ka dibna marka la quudiyo caanaha naaska oo lagu daro quudinta nafaqada illaa 15-16 bilood miisaankoodu wuxuu gaarayaa 420-480 kiilo garaam.
Haddii aad u codsato naas-nuujinta caadiga ah ee dhalinyarada, kororku wuxuu noqon doonaa 600 ilaa 800 garaam maalintii, iyo naas nuujinta waxay noqon doontaa ilaa 1 kilo.
Horeba da'da 1.5-2 sano, gumeysi caadi ahaan loo oggol yahay hilibka. Badeecada gawaarida ah ee ka timaada hal bakhti ayaa laga yaabaa in ay tahay 50 illaa 60%. Tilmaamahan wuxuu sidoo kale ka qayb qaataa lafaha iftiinka ee xayawaanka.
Tayada hilibka lo'da ee laga helo lo'da madow iyo caddaanka ah waxaa loo arkaa mid ku qanacsan. Waa dufan iyo casiir leh, laakiin sida waafaqsan shuruudaha ugu muhiimsan ee astaamaha dhadhanka ah ee noocan ah hilibka, weli ma gaaro tilmaamihii la rabay.